XOG+SAWIRRO: Maxaa ka soo baxay kulan gaar ah oo ku saabsanaa Xaaladda Tukaraq, dhexmarayna Biixi & Keating? | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL XOG+SAWIRRO: Maxaa ka soo baxay kulan gaar ah oo ku saabsanaa Xaaladda Tukaraq, dhexmarayna Biixi & Keating? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha XOG+SAWIRRO: Maxaa ka soo baxay kulan gaar ah oo ku saabsanaa Xaaladda Tukaraq, dhexmarayna Biixi & Keating?
XOG+SAWIRRO: Maxaa ka soo baxay kulan gaar ah oo ku saabsanaa Xaaladda Tukaraq, dhexmarayna Biixi & Keating?
May 13th, 2018 · 3 Comments
HARGEYSA(P-TIMES)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay wehliyaan Gudoomiyaha baarlamaanka & Wasiiraddiisa ka soo jeeda gobalada Sool & Sanaag ayaa la kulmay Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Micheal Keating oo maanta booqday magaalada Hargeysa.
Kulanka oo qaatay labo saacadood in ka badan ayaa looga wada hadlay arrimaha la xariira Ammaanka, gaar ahaana xiisadaha colaadeed ee u dhaxeeya maamulada Puntland & Somaliland, waxaana aad diiradda loo saaray qadiyadda ka aloosan deegaanka Tukaraq.
Ergayga gaarka ah ee QM ayaa u soo jeediyey Somaliland in ay ciidamadeeda dib ugu celiso deegaanadii ay joogeen bilowgii sannadkan, si looga baaqsado dagaal ka dhaca deegaanka Tukaraq, kaas oo uu sheegay in uu yahay mid aan la dhayalsan Karin.
Ergaygu wuxuu muujiyey walaaca uu ka qabo marxaladdan, isagoo sheegay in dagaal dhacaa uu keeni karo dhaawac dhanka Ammaanka ah oo soo gaara labada dhinacba, wuxuuna sheegay in ay Qaramada Midowbay nabadda taageersan tahay.
Madaxweynaha Somaliland wuxuu si bareer ah u diiday in uu ciidamadiisa kala baxo deegaanka Tukaraq, wuxuuna sheegay in ay ku sugan yihiin gudaha deegaanadiisa, taas oo uu horey u cadeeyey.
Gudoomiyaha baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax oo ka soo jeeda gobalka Sool ayaa sheegay in ay Somaliland nabad ka shaqeynayso oo aysan dhaafi doonin deegaanada ay hadda kusugan yihiin, taas oo u muuqanaysa in ay ku jirto hanjabaad.
Sidda muuqata wada hadaladii ka dhacay Aqalka Madaxtooyada ee Hargeysa ayaan laga gaarin natiijo wanaagsan, waxaana aad laysku weydiinayaa talaabada ku xigi karta ee ay sameynayso Qaramada Midowbay oo dadaal xoog badan bixinaysay saacadihii ugu dambeeyey.
May 13, 2018 at 8:52 pm / Reply
Ma jiraaan wax Sool matala ee halkaas kula kumey waa afar Horgal ee Baashe hogaaminayo, iyo qaar isaaqa ee lagu darey. waxaasi waa flimadoodii.
May 13, 2018 at 9:53 pm / Reply
ISaaq wuxuuku qabsaday dagaal hadana waa lagaga saaridoonaa
May 14, 2018 at 6:23 am / Reply
website kan snm baa iska leh